के हो डिजिटल मेकअप ? » Enavanari
के हो डिजिटल मेकअप ?
मेकअप भनेको यस्तो कार्य हो, यसले सुन्दरताका साथै वास्तविकतामा निखारता ल्याउने काम गर्छ । सुन्दर वस्तुलाई अझ सुन्दर र आकर्षित देखाउनु नै मेकअपको मुल उद्देश्य हो । नारी आफैंमा सुन्दरताको प्रतिक मानिन्छ । त्यसैले होला, धेरैजसो नारीहरु मेकअप गरी सजिन तथा राम्री देखिन मनपराउँछन् ।
विभिन्न किसिमको कस्मेटिक्स प्रोडक्टको प्रयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई सुन्दर बनाइ प्रस्तुत गर्नु नै मेकअप हो । समय परिस्थितिअनुसार मेकअपका किसिम पनि फरक–फरक हुने गर्छन् ।
डिजिटल मेकअप समयअनुसार शब्द तथा भाषाको परिवर्तन भएसँगै यसलाई पनि विभिन्न नाम र शव्दले चिनिन्छ । विषेशगरी फिल्म, क्यामेरा वा सरल भाषमा भन्नुपर्दा इलोक्ट्रोनिक, डिजिटल मिडिया, डिभाइसमा प्रयोग हुने र राम्रो देखिने मेकअप डिजाइन, जसले वास्तविकतालाई जस्ताको त्यस्तै पर्दामा उतार्न सहयोग गर्छ । यो मेकअपलाई अहिले क्यामेरा मेकअप, फोटोसुट, अनसिन, स्टेज, हाई फेसन, नाटक, थिएटर मेकअप आदि भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ ।
विषेशगरी यस्तो मेकअप एचडी क्यमेरा वा स्क्रिन अथवा स्टेज पर्फमेन्सका लागि गरिन्छ । जुन मेकअप साधारणभन्दा भिन्न हुन्छ । किनकी मोडललाई दिएको क्यारेक्टरमा ढाल्न मेकअप गरिन्छ भने उसको उद्देश्य पूरा गर्न र वास्तविकतालाई अझ वास्तविक बनाउन मेकअपले मद्दत गर्छ । मेकअपले कुनै पनि मोडललाई उसको उद्देश्यअनुसारको अनुहारदेखि ड्रेससम्मको सेप बनाइन्छ, जुन पछिल्लो समयमा आवश्यक पनि देखिएको छ । विभिन्न टेक्निकहरु, प्रोडक्टसहरु एप्लाई गरी कुनै पनि मोडल या क्यारेक्टरलाई पर्फेक्ट लुक्स अन स्किन देखाउनु नै डिजिटल मेकअप हो । यसलाई एचडी मेकअप पनि भन्ने गरिन्छ ।
जहाँ काम आर्टिफिसल हुन्छ तर अपर लुक्स भने आर्टिफिसल नभएर विशुद्ध नेचुरल देखिन्छ । जसका लागि एचडी क्यामेरा अनि लाइटलाई म्याच हुने प्रोडक्स प्रयोग गरी मेकअपलाई न्याय गरिन्छ । मोडल एकदम सहि भूमिकामा आउँछ, जुन किसिमको आफूलाई चाहिएको छ । जुन भूमिकामा उसलाई मोडल प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै हेर्दा पनि नेचुरल र क्लियर देखिन्छ । बनावटी, मेकअप एउटा यस्तो काम हो, जसले काल्पनिक वस्तुलाई पनि वास्तविकतामा परिणत गरिदिन्छ । डिजिटल मेकअप पनि फरक–फरक किसिमको हुने गर्छ ।
कुन अवस्थामा कस्तो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कामको उद्देश्यले नै निर्धारण गर्छ । किनकी कुनै अवस्थामा एकदम कम या सफ्ट म्याट चाहिन्छ भने कुनै अवस्थामा ग्लोरी, साइनी लुक्स दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्था सम्पूर्ण कुरा नै बदल्नुपर्ने हुन्छ । सफ्ट अथवा म्याट लुक्स दिनुपर्दा सबै प्रोडक्स म्याट नै हुने गर्छ भने खासै कन्सटोरिङ पनि गरिराख्नु जरुरी हँुदैन । साइनी लुक्समा चाहि धेरै थोरै फेस कन्सटोरिङ आवश्यक छ, जसले मोडलको चरित्रलाई सुन्दर तथा वास्तविक देखाइन्छ ।
मोडलको भूमिका गरिब, तथा अशक्ततता साथै बुढो छ भने त्यस्तै वास्तविक झल्किने मेकअप गरी हेयर ड्रेसअप पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । जसले उसको भूमिका निर्वाह गर्न सुहाउँदो देखिन्छ । कुनै हरर मूभी या स्किन गर्नुपर्नेछ भने अब उसको मेकअप पनि त्यस्तो हुन्छ । तपाईले कल्पना गरेअनुरुप कुनै पनि क्यारेक्टरलाई उसको सुहाउँदो अवस्थामा परिणत गर्नु हो । यसमा विभिन्न किसिमको मेकअप गरेर क्यारेक्टरलाई रियालिटिमा परिणत गरिन्छ, जहाँ उसको फेसियल तथा हेयर स्टाइल तथा ड्रेस परिवर्तन गरिन्छ ।
मेकअप भनेको मस्करा लिपस्टिक, आइलाइनर र फाउण्डेस लगाउनुमात्र होइन, राम्रो लुक्स दिइ सुन्दर देखाउनु हो । त्यसैले मेकअप क्यारेक्टर आर्ट मोडलको रोलअनुसार उसलाई तयार पारिन्छ भने त्यो नै डिजिटल मेकअप हो ।